Iyo Nyowani Yakagara Yakaunganidzwa Penthouse Refrigeration System Yakapedzwa-NEWS-Square Technology Boka Co, Ltd.
Iyo Nyowani Yakagara Yakaungana Penthouse Refrigeration System Yakapedzwa
Square Technology yakaburitsa yayo itsva firiji system munaJune 1,2020. Iyi izere-inoratidzirwa firiji system i100% yakaunganidzwa mune yakazara yakavharirwa furemu usati wasununguka. Yakapotsa yabvisa munda pombi yekubatanidza basa, kunze kwekubatana pakati pefriji system uye evaporative condenser, inozoiswa pamusoro peiyo furemu. Iyi mamiriro eunyanzvi dhizaini anoratidza zvinotevera zvinotevera:
Space yekuchengetedza. Dhizaini inokwana, zvese zvishandiso nemapaipi zvakavharirwa mufuremu rakagadzirwa nehunyanzvi dhizaini
Investment kuchengetedza. Hapana imwe imba yefriji inodiwa kuti ivakwe. Sevha mutengo wekuvaka. Icho chakavharirwa chiratidzo chemamiriro ekunze. Hapana chimwe chimiro kana denga rinodiwa.
Kuiswa kwemunda mutengo uye nguva yakachengetedzwa. Zvese zvikamu zvakagara zvakaunganidzwa uye mapaipi akafanobatanidzwa. Mutengi anongoda kubatanidza mapaipi matatu pakati peye condenser uye firiji system mumunda.
Simba-kuchengetedza. Kusvikira ku20% yemagetsi inogona kuchengetwa sezvo inverter inoshandiswa kudzikisa simba remagetsi zvisina tsarukano uye munguva chaiyo mukupindura kune chaiyo firiji mutoro.
Kudzora kwemamiriro ekunze. Fans dzakagadzirirwa kupa yekumanikidza kufefetedza uye chengetedza mukati tembiricha mukati mekushanda renji. Mwenje inopihwa mukati meyakavharirwa.
Masuo anowanikwa kumativi ese eakavharirwa kubvumidza kuzara kweiyo sevhisi firiji.
Yakagadzirirwa kune zvakasiyana siyana zvinodiwa. Iyo sisitimu inogona kuve yakasarudzika-yakagadzirirwa kusangana nevatengi akasiyana zvido, kusanganisira akasiyana compressor mamodheru, firiji mutoro, firiji, nezvimwe.
PREV Dzokera NEXT